Tiyaatarada qadiimiga ah ee Griiga. Waa kuwee kuwa ugu muhiimsan? | Safarka Absolut
Mid ka mid ah tabarucyadii badnaa ee Xarago hore ilbaxnimada reer galbeedka waa tan Masraxa. Maanta waan arki doonaa sidee ahaayeen tiyaatiyadii hore ee giriigga, goobihii masiibooyin iyo majaajillo lagu soo bandhigay, masraxa qoob ka ciyaarka iyo cibaadooyinka diinta. Dhammaan magaalooyinka Griiggu waxay lahaayeen tiyaatar, maaddaama tani ay ahayd meel aasaasi ah oo loogu talagalay madadaalada iyo kaqeybgalka muwaadiniinta nooc kasta oo polis ah.
Tiyaatarada ugu horeeya Griiga ayaa ku yaalay macbudka agtiisa, maadaama markii hore loo isticmaali jiray in lagu xuso xafladaha diinta. Qaab-dhismeedkeedii hore wuxuu ahaa mid aad u fudud, in kasta oo waqti la sii horumarinayey illaa laga gaadhayey qaabka aan maanta naqaan.
Waxay ku jirtaa waqtiyadii caadiga ahaa, inta u dhaxeysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor, marka tiyaatarka Griiggu helo qaab dhismeedkiisa saxda ah. Iyada oo leh qaab wareeg ah, oo cirka u furan oo had iyo jeer ku yaal meelo leh meelo badan. Qulqulka bulshada ee sii kordheysa ayaa lagu qasbay dhismaha bililiqo iyo dhismayaal kale oo dheeri ah.
Waxaa jira muhiim ah farqiga u dhexeeya tiyaatarada Greek iyo Roman. Kuwii dambe waxaa lagu dhisay dhul fidsan oo jaranjaradooda waxaa lagu dhisay qasnado iyo arches. Masraxyada Griiga, dhanka kale, waxay sifiican ugu dhexjireen deegaanka. Waxaa loo dhisay iyagoo ka faa'iideysanaya dhulka, tusaale ahaan buuraha dushooda. Markii dambe, tuulmooyin dhulka ka mid ah ayaa loo dhisay si gaar ah oo loogu talagalay inay fariistaan ​​tarabuunka iyaga saaran.
Waxay ahayd goobahan cajiibka ah ee Giriiggii hore ay awoodeen inay ku raaxaystaan ​​musiibooyin markii ugu horreysay. Aeschylus, Sophocles iyo Euripides, in kasta oo waliba majaajilooyin ixtiraam darro ah oo ka mid ah Aristophanes.
2 Qaab dhismeedka iyo qaybo ka mid ah tiyaatarada Greek
2.4 Qaybaha kale ee tiyaatarada Greek
3 Tiyaatarada ugu fiican ee la ilaaliyo
3.1 Tiyaatarka Epidaurus
3.2 Tiyaatarka Delphi
3.3 Tiyaatarka Dionysus ee Athens
Mid ka mid ah astaamaha ugu yaabka badan ee tiyaatarka Giriiggu waa acoustics-keeda cajiibka ah. Tani waxay wax badan ka sheegeysaa kuwa nashqadeeyay oo dhisay xayndaabyadan, iyagoo ka faa'iideysanaya runti aqoon farsamo oo horumarsan waqtigooda.
Tiyaatarada ugu waaweyni waxay qaban karaan ilaa 18.000 oo daawadayaal ah. Sababo jira awgood, in badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu qasbay inay qabsadaan goobo ka fog goobta. Haddana codadka jilayaasha, muusigga iyo heesaha heesaha ayaa ku gaadhay iyaga oo wadata caddeyn guud.
Tiyaatarada Giriigga ee qadiimiga ah waxaa loogu talagalay in si gaar ah loogu fiirsado acoustics
Tusaalaha ugu caansan ee tan ayaa laga heli karaa Tiyaatarka Epidaurus (sawirka ku yaal madaxa), kuna yaal qiyaastii 70 kiilomitir koonfur Atenas. Halkaas waa caado in laga yaabiyo dadka soo booqda iyadoo la adeegsanayo banaanbax ficil fudud: waxaa lagu casuumay inay fadhiistaan ​​meelaha ugu fog tarabuunka oo ay aamusaan. Marka xigta, dhagxaan dhagax ah oo masraxa ka mid ah (skne) qadaadiic ayaa la tuuray, oo dhawaaqiisu si fiican ugu dhacayaa dhagaha dhammaan daawadayaasha, meel kasta oo ay fadhiyaan.
Daraasadihii ugu dambeeyay ee ku saabsan acoustics-ka waxay muujinayaan in furaha uusan ku koobnayn oo keliya naqshadda guusha ee xayndaabka, laakiin sidoo kale dhagaxa nuuradda ee kuraasta tarabuunka, awoodna u leh inuu soo nuugo mowjadaha codka ee ka hooseeya 500 Hz.
Qaab dhismeedka iyo qaybo ka mid ah tiyaatarada Greek
Masraxyada Giriiggu waxay ka koobnaayeen saddex waxyaalood oo waaweyn: koilon, orchestra y skne, marka lagu daro taxane walxaha kaabayaasha ah.
Qaab dhismeedka masraxa Griiga
Waa wareegga wareegga ee ay sameeyeen tallaabooyinka, halka ay fadhiyeen dhagaystayaashu. Wakhtiyadii dambe ayaa la odhan jiray tiyaatarka, waa eray ereygan hadda jira ee "tiyaatarka" uu ka soo jeedo. Sida tiyaatarada maanta iyo garoomada ciyaaraha, waxaa loo kala qaybiyey qaybo ay ka go'een marinnada.
Maalmihii hore dadku si toos ah ayay dhulka u fadhiisteen. Markii dambe, kuraasta dhagaxa ayaa la dhisay, safafka horena, kuraas alwaax ka raaxo badan.
Booska meesha coro iyo qoob ka ciyaarka. Dhab ahaan, agagaarka orchestra dhismaha intiisa kale wuu dhashay. Maalmihii hore wax yar meesha allabariga in lagu allabaryoilaahyada waxqabadka kahor.
Guud ahaan, ka orchestra Waxaan lahaa qaab wareeg ah oo waxaa laga soocay istaandarka darbi hoose.
La skne (goobta), halka ay jilayaasha, waxaa lagu soo daray qaab dhismeedka markii shaqooyinkii ugu horreeyay ee masraxa la bilaabay inay matalaan. Qaabkeedu wuxuu ahaa mid cidhiidhi ah oo dherer ah, badiyaa waa loo kiciyey dhinaca orchestra, si ay si buuxda ugu wada muuqan lahayd dadweynaha oo dhan.
Masraxyo badan ayaa lahaa qaab dhismeedka gadaashiisa skne wac paraskenia. Xagga kore iyada ayaa fidiyay qanjo, qurxinta macmalka ah si ay u matalaan xaalado kala duwan, sida lagu sameeyo tiyaatarka maanta.
Qaybaha kale ee tiyaatarada Greek
Marka lagu daro qaybahan aasaasiga ah ee dhismaha, tiyaatarada Griiga waxay lahaan karaan waxyaabo kale oo yar yar ama dheeraad ah sida kuwan soo socda:
Diazome: Wadada isku xirta oo kala soocday istaagga dhererkeed una ogolaaday daawadayaasha inay galaan kuraastooda
Feejignaan: booska ku yaal Skené gadaashiisa, badiyaa waa laga qariyey indhaha daawadayaasha. Waxay u isticmaali jireen jilaayaasha inay dharka ku beddelaan.
baroor-diiqnimo: marinno ay jilaayaashu ka soo galaan goobta.
Proskenion: meel ku taal Skené hortiisa, oo lagu sharraxay taallooyin iyo dhir.
Tiyaatarada ugu fiican ee la ilaaliyo
Weli ma jiraan qaar ka mid ah tiyaatarkii Greek-ga ee qadiimiga ahaa oo aan la dhacsan karno oo aan baran karno? Nasiib wanaagse, haa, in kastoo qaar badani iyaguna la waayey. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee la ilaaliyo:
Kor ku xusan oo lagu xusay ay acoustics, tiyaatarka Epidaurus ayaa laga yaabaa inuu yahay kan ugu caansan tiyaatarada Greek-ga qadiimiga ah ee la yaqaan. Waxay ku taal waqooyi-bari Jasiiradda Peloponnese Peninsula ee Giriigga waxaana la dhisay qarnigii 14.000aad ee dhalashadii Ciise ka hor. C. Waxay qaadi kartaa ilaa 1988 oo daawadayaal ah. Waxay ka mid ahayd Goobaha Dhaxalka Adduunka illaa XNUMX.
Si dhow ugu xidhan cibaadada ilaaha Apollo iyo Oracle ee Delphi. Tiyaatarkan cajiibka ah ee 5.000-kursi wuxuu u soo bandhigay daawadayaasheeda muuqaal muuqaal qurux badan oo ku saabsan Dooxada Cirra. Riwaayadaha masraxa ka sokow, waxay kaloo martigelisay bandhigyo kale iyo dabaaldegyo la xiriira Ciyaaraha Pythian.
Tiyaatarka Dionysus, ee Athens
Tiyaatarka Dionysus ee Athens
El Tiyaatarka Dionysus waxay ku taal cirifka koonfur-galbeed ee Athenian AcropolisKani wuxuu ahaa tiyaatarka ugu weyn adduunka Griiga, oo qaadi kara ku dhawaad ​​18.000 oo daawadayaal ah. Sida magaceeda ka muuqata, waxaa loo kiciyey in lagu bixiyo qoob-ka-ciyaarka iyo bandhigyo lagu sharfayo ilaaha Dionysus. Ku koilon iyo orchestra Dhawaan waa la cusboonaysiiyay, laakiin qaab dhismeedkoodii asalka ahaa wali wuu taagan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tiyaatarada qadiimiga ah ee Griiga